बुद्धि - एक अमूल्य सम्पत्ति - Lekhapadhi प्रेरणादायी कथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
बुद्धि – एक अमूल्य सम्पत्ति
लेखक : लेखापढी २१ पुष २०७८, बुधबार १२:०६ मा प्रकाशित
एउटा गाउँमा एक बाह्मण गुरू बस्थे, उनको बुद्धिको कीर्ति टाढा-टाढा फैलिएकाे थियाे ।
एकपटक त्यहाँका राजाले उनलाई छलफलका लागि बोलाए । लामो छलफल पछि राजाले भने- “तपाई धेरै जानकार हुनुहुन्छ, धेरै शिक्षित हुनुहुन्छ तर तपाईंको छाेरा किन यति मूर्ख छ ? उसलाई पनि केही सिकाउनुहोस् । तपाईकाे छाेरालाई सुन चाँदीमा के मूल्यवान छ, त्यो पनि थाहा छैन ।” यसो भन्दै राजा चर्को स्वरमा हाँसे ।
तपाईकाे छाेरालाई सुन चाँदीमा के मूल्यवान छ, त्यो पनि थाहा छैन ।” यसो भन्दै राजा चर्को स्वरमा हाँसे ।
ब्राह्मणलाई नराम्रो लाग्यो, घर गएर उनले छाेरालाई सोधे “सुन चाँदीमा कुन मूल्यवान हो ?”
“सुन”, एक पल नगुमाई उनकाे छाेराले भने।
“तिम्राे जवाफ त ठिक छ, त्यसो भए राजाले किन यसो भने ? राजाले सबैकाे बीचमा मेरो खिल्ली पनि उडाए ।”
बाह्मणकाे छाेराले कुरा बुझ्यो, र उसले भन्यो, “राजाले गाउँको छेउमा खुल्ला दरबार राखेका छन्, जसमा सबै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू संलग्न छन् । त्यो दरबार मेरो विद्यालय जाने बाटोमा पर्छ । उनले त्यहाँ एक हातमा सुनको सिक्का र अर्को हातमा चाँदीको सिक्का राखेर उनीहरूले मलाई देखेर बोलाउँछन्, जुन बढी मूल्यवान छ त्यो लिन आग्रह गर्छन्, अनि म चाँदीको सिक्का लिन्छु । सबै हाँस्छन् र रमाउँछन् । यो लगभग हरेक दिन हुन्छ।”
“त्यसो भए तिमि किन सुनको सिक्का उठाउँदैनौ, मानिसहरूकाे वीचमा आफ्नो बदनाम गर्छाै र मेराे पनि ?,
केटा हाँस्यो र बुबाको हात समातेर भित्र लग्याे ।
अनि ढोकाबाट एउटा बाकस निकालेर चाँदीको सिक्काले भरिएको देखायो । यो देखेर बाह्मण छक्क पर्याे ।
म पनि बाह्मणकाे छाेरा हुँ, बुद्धिले काम गर्छु, मुर्ख हुनु बेग्लै कुरा हो । अनि मुर्ख मान्नु फरक कुरा हो…
केटाले भन्यो, “मैले सुनको सिक्का उठाएको दिनदेखि खेल बन्द हुनेछ। मलाई मुर्ख सम्झेर रमाइलो गर्छन्, उनीहरूले मलाई मुर्ख सम्भेर रमाइलाे गर्छन भने गर्न दिनुहाेस तर यदी मैले बुद्धिमानी देखाए भनेमा मैले केही पनि पाउँदीन । म पनि बाह्मणकाे छाेरा हुँ, बुद्धिले काम गर्छु, मुर्ख हुनु बेग्लै कुरा हो । अनि मुर्ख मान्नु फरक कुरा हो…
सुनौलो अवसरको फाइदा उठाउनु भन्दा हरेक माैकालाइ सुनाैलाे अवसरमा (सिक्कालाई सुनमा) परिणत गर्नु राम्रो हो ।
बुद्धिकाे सही स्थान र समयमा प्रयाेग गर्नु अझ बुद्धिमता हुनेछ ।
Lekhapadhi, www.lekhapadhi.com, lekhapadhimedia@gmail.com
For more read Please follw us Facebook
प्रत्येक व्यक्तिको महत्त्व – एक उपदेशात्मक कथा विश्वास
Don’t want to do what I had done in “Mumbai”?
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भयो